KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dagaalka Drones-ka & Wadamada laga Hago
Thursday 6 December 2012 08:05
Dagaalka Drones-ka & Wadamada laga Hago
Nairobi (KON) - Waxaa Hawada Soomaaliya kusoo badanaya Diyaaradaha loo isticmaalo Basaasnimada iyo Dilka la shiisho oo aan Duulyaha laheyn loona yaqaano "Drones".
Diyaaradahaas maadaame uusan Duuliye saarneen waxaa laga hagaa Xarumo kale duwan oo ku kala yaala Tel Aviv (Isreal), Houston (Mareykanka) iyo Maraakiibta Dagaalka ee Mareykanka.
Diyaaradaha Drone-ka ayaa waxaa laga soo sheegay in lagu arkay Dagaanada kala ah: Hobyo, Marka, Kimaayo iyo Waajid. Waxaana la arkay Waqtiyo kala duwan sida Aroorti, Duhurkii iyo Waqtiyada ku aadan Qorax dhaca.
Waxaa loo maleynayaa ineysan aheyn Hal Diyaarad oo kaliya (Drones) waayo Waqtiga lagu sheegay Hobyo ayaa Magaalada Markanah laga arkay.
Diyaaradahaas oo Dowladaha sameeya ey kamid yihiin Dowlada Isreal, Mareykanka iyo Jarmalka oo saara Qalabka Masawirka soo gudbiya.
Dowladaha Bakistaan iyo Afgaanistaan ayeey Diyaaradahaas ku laayeen Dad badan, hadana waxaa la hadal hayaa in loo isticmaalo Dalka Suuria.
Lama oga teer iyo hada inta Qof ey ku dileen Soomaaliya Diyaaradahaan, waxaase la sheegay in aad loogu adeegsaday Gobollada Jubbada Hoose iyo Bay & Bakool.